နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: 2012
မန်းတောင်ရိပ်ခို (Piano Cover)
သူများတွေလို မြန်မာပြည် သင်္ကြန် ပြန်မကဲနိုင်လို့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ကောက်တီးပစ်လိုက်တဲ့ ဘွိုင်းဗားရှင်း မန်းတောင်ရိပ်ခို....။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:00 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Burma, Music, Myanmar, Piano, songs, Thingyan, Water Festival
Thingyan Moe (Cover)
နှစ်သစ်ကူးမှာ စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ အားအင်အသစ်တွေ တိုးပွားပြီး လုပ်ငန်း ကိုင်ငန်း အဆင်ပြေပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
သင်္ကြန်မိုး ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်မိုး သီချင်းကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက်လေး တီးထားတာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (နားဝင်ပီယံ သူ့လက်သံ တန်းမဝင်တာတော့ ခွင့်လွှတ်...။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:16 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Happy new year, Music, My Song, new year, Piano, Thingyan, Water Festival, Youtube, သင်္ကြန်, သင်္ကြန်မိုး
ကိုယ့်ဗားရှင်းနဲ့ကိုယ် ပြန်တင်ထားတာကို ဒီနှစ် 2012 အတာနှစ်ကူး အကြိုအနေနဲ့ ဆားချက်လိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:31 AM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
How to JailBreak A5 Chips iDevices (iPhone 4S, iPad 2) iOS 5.0.1 with Windows Version Absinthe Software
How to Jailbreak A5 iDevices on iOS5.0.1 with Absinthe Software.
၁။ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်အတိုင်း သွားပြီး မိမိတို့ အလိုရှိရာ OS Version ကို Download လုပ်လိုက်ပါ။
၂။ ဆွဲချလို့ ရလာတဲ့ RAR ဖိုင်ကို UnRar ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
၃။ ဖိုင်သိမ်းထားတဲ့ နေရာကို မှတ်ထားပါ။
၄။ မိမိတို့ရဲ့ အိုင်ဖုန်း (သို့မဟုတ်) အိုင်ပက်ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။
အိုင်ကျွန်းနဲ့ ချိတ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ ဒေတာတွေကို Backup လုပ်ပေးပါ။
Right click on iphones/ipad and choose Transfer. After Tranfer finish, then again choose Backup.
(ကျွန်တော်ကတော့ ဓါတ်ပုံတွေကို Windows Explorer သုံးပြီး သတ်သတ် ကော်ပီပေ့စ်လုပ်တယ်။)
၅။ အိုင်ကျွန်းကို ပိတ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းကို Lock Screen ကနေ Password ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင် Password ကို ဖျက်လိုက်ပါ။
၆။ ခုနက သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်ဖိုဒါကို သွားလိုက်ပါ။ အဲဒီထဲက absinthe ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကို Run လိုက်ပါ။ မိမိတို့ရဲ့ အိုင်ဖုန်း/အိုင်ပက်က ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာ သေချာရင် အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
၇။ Jailbreak ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၈။ ဆော့ဖ်ဝဲက အော်တို အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းကို သွားမတို့မထိပါလေနဲ့။ ဆော့ဖ်ဝဲကို သူ့ဟာသူ အလုပ်ပေးလုပ်နေပါစေ။
၉။ Progress Bar လေး ပြည့်ခါနီးလောက်ရောက်ရင် မက်ဆေ့ခ်ျပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ မိမိတို့ ဖုန်း/အိုင်ပက်ကို Lock ကျနေတာကို ပြန်ဖွင့်ပြီး အရိုးခေါင်းပုံ icon လေး ရှိတဲ့ နေရာကို ရှာပါ။ အဲဒီ icon ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ (အရိုးခေါင်းက Greenpois0n ရဲ့ လိုဂိုပါ။)
၁၀။ အဲဒီမှာ ဖုန်းက အော်တို ပိတ်ပြီး ပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
၁၁။ Cydia icon လေးကို ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ မြင်နေရရင် Jailbreak လုပ်တာ အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
၁၂။ မမြင်ရရင်တော့ ဖုန်းကို ရီစတိုး လုပ်ပြီး အစက ပြန်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
၁။ အထက်ပါနည်းသည် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်၍ အောင်မြင်ထားသော နည်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဖုန်းမတူ၍ အသင်တို့ဖုန်းနှင့် အကျွန်ုပ်၏ ဖုန်းရလဒ်ချင်း ကွာနိုင်ပါသည်။
၃။ အကျွန်ုပ်နည်းအတိုင်း စမ်းသပ်၍ မအောင်မြင်ပါက တာဝန်မယူပါ။ (Author takes no responsibilities by trying those mentioned method. Please, try it at your own risk)
As of now, My iPad2and iphone 4S were successfully jailbreak using Abisnthe.
Credit to All Dream Team and the site hosting.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:52 AM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Absinthe, greenpois0n, greenpoison, ios 5, ipad 2, iphone 4S, jailbreak, pod2g, windows
How to Jail Break iPad2on iOS 5.0.1 with Cinject_0.4.3 via Command Line method
ဒီနည်းကတော့ ဝင်းဒိုးပိုင်ရှင်များအတွက် Command Line ကနေတစ်ဆင့် လုပ်ရမယ့်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Mac သမားများအတွက်ကတော့ GUI Version ကို ဒီကနေတစ်ဆင့် ဆွဲချပြီး လွယ်လင့်တကူ ထောင်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
- Frist, Back up your iDevices Data with ituens.
- Download the CLI software from this link.
8) Just waitalittle bit. ( Don't freak out, or jizz ;) )
Fatal_error ဆိုပြီး Backup Create လုပ်တဲ့ အဆင့်မှာ ဖြစ်နေခဲ့ရင် အိုင်ပက်ကို Clean Restore ပြန်လုပ်ပါ။
Clean Restore ဆိုတာ အိုင်ကျွန်းကနေ အိုင်ပက် အသစ်စက်စက် ဖြစ်အောင် ရီစတိုး လုပ်တာပါ။
အိုင်ကျွန်းနဲ့ မချိတ်ချင်ရင် အိုင်ပက်ထဲက Setting>General>Reset>Erase/Reset all contents and Setting ကို လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
အဲဒီနောက် အစကနေ ပြန်ပြီး ထောင်ဖောက်လိုက်ပါ...။
ထောက်ဖောက်ပြီးနောက်ပိုင်း မိမိတို့ သိမ်းထားတဲ့ Backup ကနေ ပြန်ပြီး ရီစတိုး တစ်ဆင့် ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ရင် မိမိတို့ ဒေတာတွေ ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ် ဖတ်ချင်ရင် iPhone Dev Blog ကနေတစ်ဆင့်လဲ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
iPhone Dev Blog ,
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:09 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: ios 5, ipad, ipad 2, jailbreak
How to JailBreak A5 Chips iDevices (iPhone 4S, iPa...
How to Jail Break iPad2on iOS 5.0.1 with Cinject...